Booqashada Zuma ee Iran - BBC Somali
Booqashada Zuma ee Iran
Madaxweynaha South Africa, Jacob Zuma, ayaa waxaa uu booqasho rasmi ah oo laba maalmood ah ku joogaa waddanka Iran, isagoo ay wehliyaan wafdi ganacsato ah oo ballaaran.
Wadahadallada Iran iyo Koofur Africa ayaa waxaa lagu wadaa in ay ugu badnaadaan dib u dhiska xiriirka ganacsi ee labada dhinac ay lahaan jireen ee ku go'ay cunaqabateyntii caalamiga aheyd ee ganacsi ee lagu soo rogay dalka Iiraan.
Madaxweynaha dalka Koofur Afrika ayaa sheegay in ay la socdaan wafdi gacansato ah in ay tilmaamayso in Koofur Africa ay dooneyso in ay adkeyso ganacsiga ay la leedahay dalka Iran, isla markaana ay u babacdhigaan caqabadaha ka hor imaan kara in la balaariyo baaxadda gacacsi ee labada dal.
Madaxweyhaha dalka Iran, Rouhani ayaa isna ka hadlay xiriirka wanaagsan ee dalkiisu uu la leeyahay wadanka Koofur Afrika.
Waxuuna hoosta ka xariiqay in dowladda Iran ay saliidii ay ka iibin jirtay xukuumadii mid takoorka joojisay sanadkii 1979kii markii la abuuray xukuumadda Islaamiga ah ee Iran ee hogaamiye Ayatulaahi Ruuxullaahi Khumeyni.
Waxuu sidoo kale si weyn uga hadlay xushmadda uu u hayo madaxweynihii hore ee falka Koofur Afrika, Nelson Mandela.
Madaxweynaha dalka Iran ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wadahadleen iskaashigooda xag sirta marka ay timaado la dagaalanka, waxa uu ugu yeeray argagixisada.